သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေကို လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ သေချာပါပြီ - Amawpyay
သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေကို လုပ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ သေချာပါပြီ သူသင့်ကို မချစ်တော့ပါဘူး ။ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ ရည်းစားတွေ ပြောင်းလဲသွားရင် ခံစား ရပါတယ်။ သူတို့ကို မချစ်တော့ဘူးလို့ သိလိုက်ရတဲ့ အခါ အတော်ကို ထိခိုက် ခံစားရပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို ပျော်ရွှင်စေ မယ့်သူ၊ အမြဲ ဂရုစိုက်ပေးမယ့် သူကိုပဲ လိုချင်ကြပါတယ် ။ အလုပ်တွေ ဘယ်လို ပဲများများ၊ ဘယ်လိုပဲ အရေးကြီးကြီး ယောက်ျားလေးတွေဘက်က ဂရုစိုက်ရမယ်၊
ဦးစားပေး ရမယ်လို့ ယူဆကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ချစ်သူက ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ကို လုပ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ သင့်ကို မချစ်တော့ဘူးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ။
ပြောင်းလဲတယ် ဆိုတာ သဘာဝနိယာ မပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အရာရာပြောင်းလဲသွားတာကို လူတွေ မကြိုက်ကြ ပါဘူး။ ချစ်သူ ရည်းစားတွေ ဆိုရင် ပြောင်းလဲ တာကို ပိုတောင်မကြိုက်ကြပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေမှာ ဆဌမ အာရုံ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြ ပါတယ် ။
အဲဒါကြောင့် သူတို့ချစ်ရသူရဲ့ အပြုအမူပြောင်းလဲ တာတွေကို ချက်ချင်းပဲ အဖြေရှာကြပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲ မှုတွေ ရှိလာရင်တော့ မချစ်ဘူးလို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲ မှုတွေ ဖြစ်မလဲ။ ကြည့်လိုက် ကြရအောင်နော်
သကြားများရင် အရသာ ပျက်ပါတယ်။ Relationship မှာလည်း အဲဒီလို ပါပဲ။ သင့်ချစ်သူက သင့်ကို ပိုဂရုစိုက် ပြမယ်၊ ပိုချစ်ပြမယ်၊ ပိုပြီးသည်းသည်း လှုပ်ပြမယ် ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာ ဆိုတာ သေချာ ပါပြီနော် ။
2. သင်ဖုန်းခေါ်ရင် ဂရုမစိုက်ဘူး”
သင့်ချစ်သူက သင်ဖုန်းစခေါ်တာ ကိုပဲ နာရီပေါင်းများစွာ စောင့်နေတတ် သူလား။ သင်ဖုန်းခေါ်လာ တာကို စပြီး ရှောင်နေပြီ လား။ ဒီအချက်တွေ စလုပ်ပြီ ဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူကို စစ်ဆေးဖို့ လိုလာ ပါပြီ။ သင့်ကိုလျစ်လျူးရှုတယ် ဆိုတာ သူ့မှာ ပိုအရေးကြီးတဲ့ သူ ရှိနေပြီ ဆိုတဲ့ လက္ခဏာ ပါပဲ
တချို့အရာတွေကို သင့်ကို မပြောပြဘဲ ဖုံးကွယ် ထားပါ လိမ့်မယ်။ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အရာတွေကို သင်သိ သွားပြီး လုံးဝ ခွင့်လွှတ်လို့ မရတဲ့ အခါမှ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကို ဖုံးကွယ် ထားတာတွေ ရှိပြီဆိုက တည်းက မချစ်တော့ တာပါ။
Relationship ဆိုတာ ယုံကြည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ရတာပါ။ သင့်ချစ်သူက ဖုံးကွယ်တတ်လာရင်တော့ မယုံပါနဲ့တော့ ။ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေ ရင်တော့ သင်တို့ အချစ်တွေက တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ် သွားပါပြီ ။
သငျ့ခဈြသူက ဒီအခကျြတှကေို လုပျနပွေီဆိုရငျတော့ သခြောပါပွီ
သငျ့ခဈြသူက ဒီအခကျြတှကေို လုပျနပွေီ ဆိုရငျတော့ သခြောပါပွီ သူသငျ့ကို မခဈြတော့ပါဘူး မိနျးကလေးတှကေ သူတို့ ရညျးစားတှေ ပွောငျးလဲသှားရငျ ခံစား ရပါတယျ။ သူတို့ကို မခဈြတော့ဘူးလို့ သိလိုကျ ရတဲ့ အခါ အတျောကို ထိခိုကျ ခံစား ရပါတယျ။
မိနျးကလေးတှကေ သူတို့ကို ပြျောရှငျစေ မယျ့သူ၊ အမွဲ ဂရုစိုကျပေးမယျ့ သူကိုပဲ လိုခငျြကွပါတယျ ။ အလုပျတှေ ဘယျလို ပဲမြားမြား၊ ဘယျလိုပဲ အရေးကွီးကွီး ယောကျြားလေးတှဘေကျက ဂရုစိုကျ ရမယျ၊
ဦးစားပေး ရမယျလို့ ယူဆကွ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ခဈြသူက ဒီအခကျြတှထေဲက တဈခကျြကို လုပျနပွေီ ဆိုရငျတော့ သငျ့ကို မခဈြတော့ဘူးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ ။
ပွောငျးလဲတယျ ဆိုတာ သဘာဝနိယာ မပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အရာရာပွောငျးလဲသှားတာကို လူတှေ မကွိုကျကွ ပါဘူး။ ခဈြသူ ရညျးစားတှေ ဆိုရငျ ပွောငျးလဲ တာကို ပိုတောငျမကွိုကျကွပါဘူး။ မိနျးကလေးတှမှော ဆဌမ အာရုံ ရှိတယျလို့ ယုံကွညျကွ ပါတယျ ။
အဲဒါကွောငျ့ သူတို့ခဈြရသူရဲ့ အပွုအမူပွောငျးလဲ တာတှကေို ခကျြခငျြးပဲ အဖွရှောကွပါတယျ။ ဒီလိုပွောငျးလဲ မှုတှေ ရှိလာရငျတော့ မခဈြဘူးလို့ ယူဆလို့ရပါတယျ။ ဘယျလိုပွောငျးလဲ မှုတှေ ဖွဈမလဲ။ ကွညျ့လိုကျ ကွရအောငျနျော ။
သကွားမြားရငျ အရသာ ပကျြပါတယျ။ Relationship မှာလညျး အဲဒီလို ပါပဲ။ သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို ပိုဂရုစိုကျ ပွမယျ၊ ပိုခဈြပွမယျ၊ ပိုပွီးသညျးသညျး လှုပျပွမယျ ဆိုရငျတော့ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ လက်ခဏာ ဆိုတာ သခြော ပါပွီနျော ။
2. သငျဖုနျးချေါရငျ ဂရုမစိုကျဘူး”
သငျ့ခဈြသူက သငျဖုနျးစချေါတာ ကိုပဲ နာရီပေါငျးမြားစှာ စောငျ့နတေတျ သူလား။ သငျဖုနျးချေါလာ တာကို စပွီး ရှောငျနပွေီ လား ဒီအခကျြတှေ
စလုပျပွီ ဆိုရငျတော့ သငျ့ခဈြသူကို စဈဆေးဖို့ လိုလာ ပါပွီ။ သငျ့ကိုလဈြလြူးရှုတယျ ဆိုတာ သူ့မှာ ပိုအရေးကွီးတဲ့ သူ ရှိနပွေီ ဆိုတဲ့ လက်ခဏာ ပါပဲ ။
တခြို့အရာတှကေို သငျ့ကို မပွောပွဘဲ ဖုံးကှယျ ထားပါ လိမျ့မယျ။ ဖုံးကှယျထားတဲ့ အရာတှကေို သငျသိ သှားပွီး လုံးဝ ခှငျ့လှတျလို့ မရတဲ့ အခါမှ
ပွောပွပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ကို ဖုံးကှယျ ထားတာတှေ ရှိပွီဆိုက တညျးက မခဈြတော့ တာပါ။
Relationship ဆိုတာ ယုံကွညျမှုနဲ့ တညျဆောကျ ရတာပါ။ သငျ့ခဈြသူက ဖုံးကှယျတတျလာရငျတော့ မယုံ ပါနဲ့တော့ ။
ဒီအခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီနေ ရငျတော့ သငျတို့ အခဈြတှကေ တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ မှေးမှိနျ ပြောကျကှယျ သှားပါပွီ ။